Ababu Namwamba oo ku dhawaaqay in sanadka 2022-ka uu u tartami doono xilka ugu sareyo dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Ababu Namwamba oo ku dhawaaqay in sanadka 2022-ka uu u tartami doono xilka ugu sareyo dalka
Hogaamiyaha xisbiga LPK Ababu Namwamba ayaa shalay oo jimco ahayd ku dhawaaqay in uu u tartami doono xilka madaxtinimada marka lagaaro doorashada 2022-ka.
Ababu oo goor sii horeysay kasoo gostay xisbiga uu hogaamiyo Raila Odinga ee ODM ayaa sheegay in hadii xilkaas loo doorto waxa ugu hore uu qaban doono ay tahay sidii shaqaalaha dadweynaha looga yareyn lahaa mushaaradkooda iyo gunooyinka iyo in dhamaan shaqaalaha dadweynaha ay qaatan mushaar isku dheeli tiran.
Waxaa uu intaa ku daray in dhibaatada ugu weyn ee dalka haysato ay tahay in shaqaalo yar ay dowlada u qoron yihiin islamarkana qaatan mushaar badan halka shacabka intooda badanna ay noolasha la daala dhacaayan.
Xili uu ka hadlaayay isu soo bax siyaasaded oo u ku qabtay Busia waxaa uu sheegay in xisbiga uu madaxa u yahay ee LPK in uu yahay xisbiga kaliye ee maamuli karo dalka.
Ugu dambeyn waxaa uu hoosta ka xariiqay in ay la tashanayaan xibsiyada kale ee siyaasadeed si ay u midooban oo ay ugu guulestaan doorashada 2022-ka.
Dhanka kale hogaamiye kuxigeenka xisbigaasi LPK Esther Ndololo ayaa ugu baqday kenyanka in ay ka firsadaan xisbiyada ay taageerayan iyadoo intaa ku dartay in xisbiga kaliye ee talada qaban karo uu yahay LPK.
Ababu Namwamba ayaa afar bilood ka hor kasoo tagay xisbiga ODM oo uu ka haayay xilka xoghayanimada waxuuna xiligaas ku eedeyay Raila Odinga in uusan fulinin balanqadyo uu horay ugu sameyay xiligii uu ku soo biirayay ODM.
← Ururka Macalimiinta oo si kulul u cambaareeyay talaabadii lagu kala diray saraakisha waxbrashada Countiga Siaya
Xaflad lagu xusayay afar sano kadib markii ciidamada Difaacada dalka galeen soomaliya oo lagu qabtay Mombasa →